आइतबार अक्टोबर 24, 2021 |
आइतबार अक्टोबर 24, 2021
विषय — मृत्यु पछि परिक्षण
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: रोमी6: 4
“"यसैकारण जब हामी बप्तिस्मा भयौं, हामी ख्रीष्ट सँगै गाडियौं र उहाँको मृत्युमा भागीदार बन्यौं। हामी ख्रीष्टसँगै दफन भयौं ताकि हामी जोगीन सकौं अनि नयाँ जीवन जीउन सकौं। यस्तै प्रकारले, पिताको अचम्मको शक्तिले ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभयो।"”
उत्तरदायी पढाइ: 1 कोरिन्थी 15 : 19-23, 26-28
27 जस्तो धर्मशास्त्रामा छन्। भनिन्छ, परमेश्वरले प्रत्येक थोक उहाँको अधीनमा गर्नुभयो। जब धर्मशास्त्रमा भनिन्छ कि प्रत्येक बस्तु उहाँको अधीनमा गराइयो स्पष्ट अर्थ लग्छ कि परमेश्वरलाई यसमा सम्मिलित गराइएन। उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले सबै थोक अधीनमा राख्नु भयो।
1. यशया 25 : 1 (तिर 3rd ;), 6-8
1 हेपरमप्रभु, तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईंलाई आदर गर्दछु र तपाईंको नाउँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईंले उदेककोकामहरू गर्नुभयो। धेरै पहिले तपाईंले भन्नु भएका वचनहरू पूर्णत सत्य छन्। त्यस्तै भयो जस्तो तपाईंले हुन्छ भन्नु भएको थियो।
7 तर अहिले, एउटा आवरण छ जसले सबै राष्ट्र अनि जातिहरूलाई छोप्छ। त्यस आवरणलाई मृत्यु भनिन्छ।
2. मत्ती4: 23
3. मत्ती5: 1-12
3 ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले आफूलाई आत्मिक रूपले दरिद्र छौं भनी बुझेका छन्, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो।
11 धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र खेदो गर्नेछन्। झूटो बोलेर हरेक किसिमका दुष्ट कुरा गरेर तिमीहरूको खेदो गर्नेछन्, किनभने तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ।
4. मत्ती7: 24-29
5. यूहन्ना 10 :7(तिर 1st ,), 10 (म)
7 येशूले फेरि भन्नुभयो।
6. यूहन्ना 12 : 46, 49, 50 (तिर :)
49 किन? किनभने जुन कुराहरू मैले बताँए त्यो मेरो आफ्नै थिएन। पिता जसले मलाई फठाउनु भयो र के भन्नु र के शिक्षा दिनु भन्नु भयो त्यही गरें।
50 र म जान्दछु कि अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट आउनेछ।
7. मत्ती 26 : 1-4
2 परवा वल्हांडणाचा सण आहे हे तुम्हांला माहीत आहे. आणि मनुष्याचा पुत्र वधस्तंभावर खिळून जिवे मारला जाण्यासाठी शत्रूच्या हाती धरून दिला जाईल.
8. यूहन्ना 18 : 14
14 कैयाफा तिनी हुन् जसले यहूदीहरूलाई भनेका थिए कि जम्मै मानिसहरूका निम्ति एउटा मान्छे मर्नु उचित छ।
9. यूहन्ना 19 : 16 (अनि तिनीहरु)-18 (तिर 1st ,), 41, 42
17 येशूले आफ्नो क्रूस बोक्नु भयो अनि उहाँ “खोपडी ठाऊँ” तर्फ जानु भयो हिब्रू भाषामा गलगथा भनिन्छ।
10. यूहन्ना 20 : 1, 12-14, 17
1 हप्ताको पहिलो दिन बिहानै मरियम मग्दलिनी येशूको चिहानमा गई। तिनले देखिन कि त्यो ठूलो चट्टान जो चिहानको द्वारमा राखिएको थियो त्यो ढुंगा हाटाइएको थियो।
13 स्वर्गदूतहरूले मरियमलाई सोधे, हे! नारी! किन रोईरहेकी छौ? मरियमले जवाफ दिइन, कसैले मेरा प्रभुको शरीर लगेर गएछ। तिनीहरूले कहाँ राखेका छन् मलाई थाहा छैन।
17 येशूले उसलाई भन्नुभयो, मलाई नछोऊ। म अझ् सम्म पिताकोमा गई सकेको छुइँन। तर मेरा दाज्यु-भाइहरू भएकोमा जाऊ, र तिनीहरूलाई यसो भनः म मेरो पिता र तिमीहरूका पिताकहाँ फर्की जाँदैछु। म मेरो परमेश्वर र तिमीहरूको परमेश्वरकहाँ फर्की जाँदैछु।
11. रोमी 13: 11 (अहिले), 12
11 ... अब निद्राबाट ब्यूँझिने तिम्रो समय आएको छ। किनभने जति बेला हामीले विश्वास गर्यौं त्यस बेला भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति हामी नजिक भएको छ।
12 रात प्रायः सिद्धिसक्यो दिन लगभग यहाँ आइसक्यो। यसर्थः हामीले अन्धकारको कामगर्न छोडनु पर्छ, अनि उज्यालाको कामहरू गर्नु पर्छ।
12. 1 कोरिन्थी 15: 55-58
जीवन अनन्त छ। हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्छ, र यसको प्रदर्शन शुरू गर्नु पर्छ। जीवन र भलाइ अमर छन्। हामीलाई तब अस्तित्व को हाम्रो विचार को आकार, मायालुता, ताजगी, र निरंतरता, बरु उमेर र ब्लाइट मा आकार दिनुहोस्।
येशूले प्रदर्शन द्वारा जीवन को तरीका सिकाउनुभयो, कि हामी बुझ्न सक्छौं कि कसरी यो ईश्वरीय सिद्धान्तले बिरामीहरुलाई निको पार्छ, त्रुटि बाहिर निकाल्छ, र मृत्यु मा विजय।
जे होस् पाप र रोग मा आफ्नो नियन्त्रण को प्रदर्शन, महान शिक्षक कुनै पनी अर्थमा अरुलाई आफ्नो धार्मिकता को आवश्यक प्रमाण दिन बाट मुक्त। उहाँले उनीहरुको मार्गदर्शन को लागी काम गर्नुभयो, कि उनीहरु यो शक्ति को प्रदर्शन गर्न को रूप मा उहाँले गर्नुभयो र यसको ईश्वरीय सिद्धान्त बुझ्न सक्नुहुन्छ।
येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना 8: 51), "यदि एक मानिस मेरो भनाइ राख्छ, उसले कहिल्यै मृत्यु देख्दैन। त्यो कथन आध्यात्मिक जीवन मा सीमित छैन, तर अस्तित्व को सबै घटनाहरु सामेल छन्। येशूले यो प्रदर्शन गर्नुभयो, मर्नेलाई निको पार्नु र मरेकाहरुलाई जीवित पार्नु। नश्वर दिमाग त्रुटि संग भाग्नु पर्छ, आफैंलाई उसको कर्महरु संग छोडनु पर्छ, र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदर्श, देखा पर्नेछ। विश्वासले यसको सिमाना बढाउनु पर्छ र पदार्थ को सट्टा आत्मा मा आराम गरेर यसको आधार बलियो बनाउनु पर्छ। जब मानिस मृत्यु मा आफ्नो विश्वास त्याग्छ, ऊ भगवान, जीवन, र प्रेम तिर अझ छिटो अगाडी बढ्नेछ। रोग र मृत्यु मा विश्वास, पक्कै पाप मा विश्वास को रूप मा, जीवन र स्वास्थ्य को साँचो भावना बन्द गर्न को लागी हुन्छ। मानव जाति विज्ञान मा यो महान तथ्य को लागी कहिले ब्यूँझनेछ?
मृत्यु मा सार्वभौमिक विश्वास को कुनै फायदा छैन। यसले जीवन वा सत्यलाई स्पष्ट बनाउन सक्दैन। मृत्यु लम्बाइ मा एक नश्वर सपना को लागी पाईन्छ, जुन अन्धकारमा आउँछ र प्रकाश संगै गायब हुन्छ।
परमेश्वरको शक्ति को महान प्रदर्शनकर्ता को पुनरुत्थान शरीर र पदार्थ मा उनको अन्तिम विजय को प्रमाण थियो, र ईश्वरीय विज्ञान को पूरा प्रमाण दिए, - प्रमाण मानिसहरु को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। … मानिसहरुलाई लाग्छ कि उनीहरुले शरीर मारेका थिए! पछि उहाँले तिनीहरूलाई अपरिवर्तित देखाउनुहुनेछ। यसले देखाउँछ कि ईसाई विज्ञान मा साँचो मानिस भगवान द्वारा शासित छ - राम्रो द्वारा, नराम्रो द्वारा - र यसैले एक नश्वर होइन तर एक अमर हो।
येशूको अपरिवर्तित शारीरिक अवस्था मृत्यु जस्तो लागे पछि सबै भौतिक परिस्थितिहरु भन्दा माथि उचालिएको थियो; र यो उत्थानले उनको आरोहण को व्याख्या गर्यो, र निस्सन्देह चिहान बाहिर एक परिवीक्षाधीन र प्रगतिशील राज्य प्रकट भयो।
अस्तित्व को विज्ञान सम्म पुग्न सम्म शारीरिक भावना को एक विश्वास हुन जारी छ। गल्तीले यहाँ र पछि दुबैको आफ्नै आत्म-विनाश ल्याउँछ, किनकि नश्वर दिमागले आफ्नै शारीरिक अवस्था बनाउँछ। मृत्यु को रूप मा अस्तित्व को अर्को विमान मा घटित हुनेछ, जब सम्म जीवन को आध्यात्मिक समझ सम्म पुग्यो।
भौतिक जीवन को यो सपना को लागी आवश्यक समय, यसको तथाकथित सुख र पीडाहरु लाई अँगालेर, चेतना बाट गायब गर्न को लागी, "कुनै मानिसलाई थाहा छैन ... न पुत्र, तर बुबा।" यो अवधि त्रुटि को दृढता अनुसार लामो वा छोटो अवधि को हुनेछ।
7. 296: 4-9 (तिर 2nd.)
प्रगति अनुभव बाट जन्मन्छ। यो नश्वर मानिस को पकाउने हो, जसको माध्यम बाट नश्वर अमर को लागी छोडिन्छ। या त यहाँ वा पछि, दु: ख वा विज्ञान जीवन र दिमाग को बारे मा सबै भ्रमहरु लाई नष्ट गर्नु पर्छ, र भौतिक भावना र स्व को पुनरुत्थान गर्नु पर्छ। बुढेसकालमा उसको कर्म संगै छोडिनु पर्छ।
जब सम्म मानिसको सद्भाव र अमरता अधिक स्पष्ट हुँदै जान्छ, हामी भगवान को साँचो विचार प्राप्त गर्दैनौं; र शरीर प्रतिबिम्बित गर्दछ के यो शासन गर्दछ, चाहे यो सत्य हो वा गल्ती, समझ वा विश्वास, आत्मा वा कुरा हो। तेसैले "अब आफैं उहाँ संग परिचित हुनुहोस्, र शान्ति मा रहनुहोस्।" सतर्क, शान्त र सतर्क रहनुहोस्। बाटो सीधा र साँघुरो छ, जो यो समझमा जान्छ कि भगवान मात्र जीवन हो। यो शरीर संग एक युद्ध हो, जसमा हामीले पाप, रोग, र मृत्यु लाई जित्नै पर्छ, या त यहाँ वा पछि, पक्कै भन्दा पहिले हामी आत्मा को लक्ष्य, वा भगवान मा जीवन पुग्न सक्छौं।
पाप रहित आनन्द, - जीवन को सिद्ध सद्भाव र अमरत्व, असीमित ईश्वरीय सौन्दर्य र एक शारीरिक सुख वा पीडा बिना भलाई को अधिकार, - मात्र साँचो, अविनाशी मानिस, जसको अस्तित्व आध्यात्मिक गठन। अस्तित्व को यो राज्य वैज्ञानिक र अक्षुण्ण छ, - एक पूर्णता मात्र ती जो ईश्वरीय विज्ञान मा ख्रीष्ट को अन्तिम समझ छ द्वारा स्पष्ट। मृत्यु कहिल्यै अस्तित्व को यो राज्य हतार गर्न सक्नुहुन्न, को लागी मृत्यु को पराजित हुनु पर्छ, को अधीनमा छैन, अमरत्व देखिनु भन्दा पहिले।
हामी यो भन्न को लागी कुनै अधिकार छैन कि जीवन अब पदार्थ मा निर्भर गर्दछ, तर मृत्यु पछि यो मा निर्भर गर्दैन। हामी हाम्रो जीवन यहाँ जीवन को विज्ञान को अज्ञानता मा बिताउन सक्दैनौं, र चिहान बाहिर यो अज्ञानता को लागी एक इनाम पाउने आशा। मृत्युले हामीलाई अज्ञानताको बदलाको रूपमा सामंजस्यपूर्ण र अमर बनाउँदैन। यदि यहाँ हामी ईसाई विज्ञान, जो आध्यात्मिक र शाश्वत छ, को लागी कुनै ध्यान दिदैनौं, हामी आध्यात्मिक जीवन को लागी पछि तयार हुनेछैनौं।
पाप र गल्ती जो मृत्यु को क्षण मा हामी संग छ त्यो क्षण मा बन्द छैन, तर यी त्रुटिहरु को मृत्यु सम्म सहन। पूर्ण आध्यात्मिक हुन को लागी, मानिस पाप रहित हुनु पर्छ, र ऊ तब मात्र बन्छ जब ऊ पूर्णता मा पुग्छ।
सार्वभौमिक मुक्ति प्रगति र परिवीक्षा मा निर्भर गर्दछ, र उनीहरु बिना अप्राप्य छ। स्वर्ग एक इलाका हैन, तर दिमाग को एक दिव्य राज्य हो जसमा मन को सबै अभिव्यक्तिहरु सामंजस्यपूर्ण र अमर छन्, किनकि पाप त्यहाँ छैन र मानिस को आफ्नै धार्मिकता पाइएको छैन, तर "प्रभु को मन" को कब्जामा , "धर्मशास्त्रले भन्छ।
जब यो जानिन्छ कि रोग जीवन लाई नष्ट गर्न सक्दैन, र कि मृत्यु मानिसहरु पाप वा रोग बाट बचाईएको छैन, यो समझ जीवन को नयाँपन मा छिटो हुनेछ। यो या त मर्ने इच्छा वा चिहान को डर मा मास्टर हुनेछ, र यस प्रकार नश्वर अस्तित्व को घेरामा रहेको ठूलो डर लाई नष्ट गर्दछ।
हुनु भनेको पवित्रता, सद्भाव, अमरता हो। यो पहिले नै प्रमाणित भइसकेको छ कि यो ज्ञान, सानो डिग्री मा पनि, नश्वर को शारीरिक र नैतिक स्तर माथि उठाउनेछ, दीर्घायु बढाउनेछ, शुद्ध र चरित्र उचाल्नेछ। यस प्रकार प्रगति अन्ततः सबै त्रुटि नष्ट, र प्रकाशमा अमरता ल्याउनेछ।